Home Wararka Gudaha Waxaa goor dhow soo gaba gaboowday xafladii caleemasaarka madaxweynaha 10aad
Waxaa goor dhow soo gaba gaboowday xafladii caleemasaarka madaxweynaha 10aad ee Soomaaliya oo maanta oo khamiis ah ka dhacday teendhada afisiyooni ee magaalada Muqdisho.
Caleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa ka soo qeyb galay wafuud heer caalami ah iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda Federaalka Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa dalka ku soo dhaweeyay Madaxda iyo wufuudda caalamiga ah ee ka qeyb galey munaasabadda caleemosaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugana mahadceliyay ka soo qaybgalkooda caleemosaarka madaxweynaha JFS.
Sidookale madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ka soo qeyb galay xafladda caleemasaarka madaxweynaha ayaa tilmaamay in uu ku faraxsanyahay dowladda cusub uuna dhanwalba si walaalnimo ah uga taageeri doono.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna tilmaamay in dowladdiisu ay wax badan ka qabandoonto arrimaha abaaraha dalka, kana shaqeyndoonto wanaajinta cidkasta oo jecel madaxbanaanida wadankeena.
Previous articleMucjisaddii Uhura kenyatta caleemma saarkii maanta
Next articleXildhibaan Sanbaloolshe oo hartaallo afar qodob oo aad muhiim u ah.